Xiriirka Kenya iyo Soomaaliya oo meeshii ugu xumeyd gaaray - BBC News Somali
16 Febraayo 2019
Image caption Kenya ayaa xiriirka u jartay dowladda Soomaaliya
Xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa dalalk Kenya iyo Soomaaliya ayaa cirka isku shareertay, kadib markii dowladda Kenya ay Soomaaliya ku eedeesay in London ay ku "xaraashtay" ceelal shidaal oo ku yaala xuduuda lagu mursan yahay.
Sahminta shidaalka ayay Kenya sheegtay in laga sameeyay xadka dhanka badda ee ay wadaagaan Soomaaliya. Kenya ayaa ku adacootay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay magaalafda London ku "xaraashtay" ceelal shidaal oo ay leedahaya. Shantii bisha Febraayo ee sannadkii 2019-ka ayaa waxaa magaalada London ee Britain lagu qabtay shir lagu soo "bandhigayay maclumaad la xiriira sahmin shidaal" oo laga sameeyay Soomaaliya.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa BBC-da u sheegay in go'aankan kahor, Kenya ay dowladda Soomaaliya u dirtay warqad ay uga dalbanaeyso in raaligelin ay ka bixiso arrinkaasi, dibna ug laabato.
Lahaanshaha sawirka Nation
Image caption Macharia kamau
"Xadgudubkan aan wax loo dhiga lahayn ee sida sharci darrada lagu xoogayo hantida dadka reer Kenya, ma ahan mid laga aamusi karo, wuxuuna u dhigmaa fal cadawtinimo oo ka dhan ah dadka reer Kenya iyo hantidooda".
"Xaraashkan gardarrada ah wuxuu u qalmaa in laga hortago, dadka reer Kenya si wada jir ah ayay uga hor-imaan doonaan, waxaa sidaas si la mid ah uga hor-imaan doono dadka samaha jecel oo dhan ee aaminsan ilaalinta sharciyada caalamiga ah, iyo in si nabadgelyo ah oo xeerarka waafaqsan lagu xalliyo murannada,". Sidaa waxaa war qoraal ah ku sheegay xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Mr Kamau.